From Junemoe (moe)
Subject: From Junemoe (moe) Tue Nov 25, 2008 4:59 am
TP နှင့် NYP တို့ နှစ်ဦး နှစ်ဖက်အကြား ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် အရေးနှင့်ပက်သက်၍ ကျောင်းပေါင်းစုံ ဆွေးနွေးမှုပြုအပြီး TP ဘက်မှ သိရှိလိုသည့် NYP မှရှင်းလင်းရန် အချက်များမှာ-
၁။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သော ကျောင်းသူမှာ- အချို့က "ပါးရိုက်ခံရသည်" ဟူ၍ လည်းကောင်း ၊ အချို့က "အထိုးခံရသည်" ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ အချို့က " Chain နှင့်ရိုက်ခံရသည်" ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ အချို့က "ခြေဖြင့်အကန်ခံရသည်" ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ အချို့က "သွားဖြင့်အကိုက်ခံရသည့်" ဟူ၍ လည်းကောင်း ပုံစံ အမျိုးမျိုးဖြင့် ဖြစ်ရပ်ကို ဖော်ညွန်း ပြောဆိုနေကြပါသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်အားလုံးကို ထိုအချိန်အခါတွင် တပြိုင်နက် အလုံးစုံ ကျူးလွန်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ TPတွင်ထိုသို့ ကျူးလွန်နိုင်သည့် ရေခဲတောင်ကြာပွင့်စား တစ်ကိုယ်တော်အဆင့်မြင့် သိုင်းသမား တစ်ဦးတစ်လေ မရှိပါ။ ရုတ်ရင်းဆန်ခတ် အခြေအနေတွင် ဘရိတ်ကင်းမဲ့သော လက်သီးများနှင့် တွန်းထိုးဆွဲရမ်းမှုများကြောင့် ဓားစားခံ ဖြစ်သွားရသော မိန်းကလေးတဦး အတွက် စိတ်မကောင်းမိပါ။ သို့သော် ရုတ်ရုတ်သဲသဲ အခြေအနေမျိုးတွင် သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် မှားယွင်းမှုများ မတော်တဆ ဖြစ်မှုများ စသည့်ဖြစ်ရပ်အမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်သည့်အတွက် အပြောကိုသာ လက်ခံမယုံကြည်သင့်၍ သေချာသော ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုကို ရှင်းလင်းပေးရန် လေးစားစွာ တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
Subject: Re: From Junemoe (moe) Tue Nov 25, 2008 5:00 am
၂။ အခင်းဖြစ်ပွါးပြီး ညဘက်၌ TPဘောလုံးအသင်းမှ ဘောလုံးသမားတစ်ဦး က NYP မှကျောင်းသူတစ်ဦးကို ဖုန်းဖြင့် ရိုင်းပြသောချိန်းခြောက်ပြောဆိုမှုမျိုး ပြုခဲ့သည်ဟူ၍ သတင်းတခု ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုညဘက်အချိန်တွင် TP ဘောလုံးသမားမှာ မိဘ သူငယ်ချင်းများနှင့် အတူတကွရှိနေသည့်အပြင် ဖုန်းဖြင့် မိန်းကလေးတစ်ဦးအား ဤသို့ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း ဘောလုံးကွင်းဖြစ်ရပ်ကို မသိရှိသေးသူ မိဘနှင့် အခြားသူ၏ သူငယ်ချင်းများက ရဲရဲကြီးအာမခံနိုင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဦး ဖြစ်နိုင်သည်ဆို သော်လည်း ထိုကာယကံရှင် မိန်းကလေးမှာ ထိုဘောလုံးသမား၏ နာမည်ဖြင့် အခိုင်အမာပြောဆိုနေသည် ဖြစ်၍ ထိုလက်ခံရရှိသည့် Call ၏ ဖုန်းနံပါတ်နှင့်တကွ အခြားခိုင်မာသော အချက်အလက်များ (ထိုဘောလုံးသမား ဖြစ်ကြောင်း ခိုင်မာသည့် အချက်များ) ကို ကာယကံရှင်၏ အမည်ဖြင့် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဖော်ပြပြောဆိုရန် လေးစားစွာ တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
၃။ အောက်ဖော်ပြပါ nick name ပိုင်ရှင်များသည် ဘောလုံးပွဲဖြစ်ရပ်မှ အစပြု၍ ဘောလုံးပွဲနှင့် မပတ်သက်သော personally တိုက်ခိုက်ရေးသားမှုများ ၊ ဘောလုံးပွဲနှင့် ပတ်သက်သော်လည်း ဒေါသအလျောက် ထိန်းသိမ်းမှုမရှိပဲ လူလူချင်း "ခွေး" ဖြင့်နှိုင်းယှဉ်၍ ပြောဆိုရေးသားခြင်း၊ ရန်ပွဲနှင့် သက်ဆိုင်မှုမရှိသော TP မှမိန်းကလေးများအား ရိုင်းစိုင်းစွာ ထိပါးပြောဆိုခြင်း စသည့် ရေးသားမှုများ၊ TP Myanmar organization နှင့်သက်ဆိုင်သော သင်္ကြန် အား Boycott လုပ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုရေးသားမှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ Post များကို Moderate လုပ်နိုင်သော Admin မှလည်း ထိုသို့သော Post များကိုလျစ်လျူရှု ထားသောကြောင့် ယခုအချိန်တွင် မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်သည်ဟူ၍ ရှင်းလင်းမှုရှိစေရန် လိုအပ်ပြီဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာတောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
(chit_thu, TP=DOGS, tutpi, witchdoll, Pride, amt1991, cute_charcoal)
Last edited by moe on Tue Nov 25, 2008 5:04 am; edited 1 time in total
Subject: Re: From Junemoe (moe) Tue Nov 25, 2008 5:01 am
ရှေ့ဆက်ဖြစ်သင့်သည့်အရာများကို မတင်ပြမီ ကျနော် junemoe ( NYP forum တွင် moe ) မှ ရှေးဦးစွာ “ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွါးမှုတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သော NYP မှ ကျောင်းသူ (လူကိုလည်းမမှတ်မိပါ ဘယ်သူခံရမှန်းလဲ မသိပါ ကျနော်လုပ်ခဲ့ခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ ဒါကြောင့် ဘယ်သူမှန်းတော့ မသိပါ ) အား တောင်းပန်အပ်ပါသည်”။ အမိ၏ ချစ်သူ အပေါ်ထားသော (အဟီး မဟုတ်ရင်ဒုက္ခ, သူငယ်ချင်းလို့ ပြောင်းဖတ်နော်) မိန်းကလေးဖြစ်သော်လည်း စွန့်လွှတ်အနစ်နာ ခံကာကွယ်မှုအတွက် အမိ၏ ချစ်သူ (လာပြန်ပြီနော် ဒီပါးစပ်၊ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် သူငယ်ချင်းနော် ပြောင်းဖတ်) နှင့်ထပ်တူ လေးစားကြည်နူး မိပါသည်( eek sorry! မကြည်နူးဘူး, ကျနော်ပါ ဝင်ကြည်နူးရင် ရန်ထပ်ဖြစ်မယ်) ဘွာတေး လေးစားမိပါသည်(အတည်တောင်းပန်ခြင်းပါ၊ မရီကြပါနှင့်)။ သို့သော် စေတနာဖြင့် အကြံပေးအပ်သည်မှာ နောက်နောင် ကျွဲ့နှစ်ကောင်ခတ်သည့်ကြားမှ မြေစာပင် အဖြစ်မခံပါနှင့်။ (ကောင်းတော့ကောင်းတယ် နောက်မလုပ်ပါနဲ့)။
ယခုတောင်းပန်မှုသည် ကျနော် junemoe တယောက်ထဲ၏ မူပိုင်တောင်းပန်မှုဖြစ်ပါသည်။ TP ဘောလုံးအသင်းနှင့် တကွ ထိုအသင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားသူများ အားလုံး၏ ကိုယ်စားပြုတောင်းပန်မှု မဟုတ်ကြောင်း သိရှိစေလိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် TP ဘက်တွင်လည်း ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပက်သက်၍ ထိခိုက်နစ်နာမှုများစွာရှိခဲ့ပါသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကျနော်တို့ဘောလုံးအသင်းမှ အသင်းသားအချို့နှင့် အခြားသောမသက်ဆိုင်သည့် သူများအား NYP Forum ထဲတွင်ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခံ ရခြင်းမှာ ကျနော်တို့ TP Myanmar ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတရပ် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစိန်ခေါ်မှုအတွက် လိုအပ်သောဖြေရှင်းချက်နှင့် တောင်းပန်မှုများလည်း TP မှ အလိုရှိပါသည်။ ထိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပြန်အလှန် တောင်းပန်ပါမှ တစ်ဦးတစ်ဦး ပြေလည်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ကျနော်တို့TP ဘက်မှ NYP ကျောင်းသူအားထိခိုက်မိသည့် အတွက် ထို ခိုက်မိမှုနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သူများမှ ယခုကဲ့သို့ Forum တွင်တောင်းပန်စာ ရေးသားမည်ဖြစ်ပြီး NYP မှလည်း NYP Forum ထဲတွင်တိုက်ခိုက်ရေးသားခဲ့မှုအပေါ် ပေးဆပ်သည့်အနေဖြင့် အထက်ပါ nick name ပိုင်ရှင်များမှ မိမိ၏အမည်ရင်းများဖြင့် တောင်းပန်စာရေးသားကာ ယခု တင်ထားသော Posts နှင့် Forum ကိုလည်းဖျက်သိမ်းပေးမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ TP မှ ကျနော်၏ Post အပါအဝင် ဘောလုံးပွဲနှင့်သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာမှန်သမျှ ဖျက်သိမ်းပေးမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။ “ထိုသဘောတူညီမှုများသည် TP နှင့်NYP တို့၏ သဘောတူညီမှုသာမက အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သော ကျောင်းကိုယ်စားလှယ်အားလုံး၏ ဆန္ဒသဘောထားလည်း ဖြစ်ပါသည်။”
Last edited by moe on Tue Nov 25, 2008 5:29 am; edited 1 time in total
ဘောလုံးရန်ပွဲနှင့် C-Box ထဲမှပြသနာ များကို ထပ်၍မဆွေးနွေးလိုပါ။ ယောက်ျားလေးအချင်းချင်း သူတပြန်ကိုယ်တလှည့် ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့်အပေါ် တွင်မှားသည်မှန်သည် ခွဲခြားဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ မိမိကျောင်းဘက်ကမိမိကြည့်လျှင် ကိုယ့်ဘက်ကသာအမြဲမှန်နေမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံး ပွင့်လင်းဖြောင့်မှန် စွာဖြေရှင်းရန် ဆန္ဒ ရှိပါက လွတ်လပ်စွာဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြေရှင်းလိုပါက ဇော်သန်းဦး(TP Myanmar soccer team's captain)- 92325385 သို့ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။ (ထိုဖုန်းနံပါတ်မှာ ခေါ်ဆိုနိုင်သော ဖုန်းနံပါတ် ဖြစ်ပါသည်။ NYPian Admin ပြောသော C-box ထဲမှ NYP ကျောင်းသားတစ်ဦးပေးသော ဖုန်းကိုခေါ်ဆိုရာတွင် ပထမအကြိမ် ၌ "wrong number"ဟု ဖြေကြားသွားပြီး နောက်ထပ်ခေါ်ဆိုရာတွင်မူ reject သာလုပ်တော့ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ TPကျောင်းသားများဘက်မှ အမှန်ပင်ခေါ်ဆိုထားကြောင်း Call History များဖြင့်သက်သေပြနိုင်ပါသည်။)
Subject: Re: From Junemoe (moe) Tue Nov 25, 2008 5:02 am
Club NYPian Admin သို့လေးစားစွာ အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ယမန်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သောအစည်းအဝေးပွဲတွင် NYP Myanmar မှ Organizer နှင့် TP Myanmar မှ အခင်းနှင့် တိုက်ရိုက်ပက်သက်သော သူများတွေ့ဆုံဆွေးနွေး၍ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပေးအယူ ပြေလည်စွာ ပြသနာကိုဖြေရှင်းရန် အားလုံးသော ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်များရှေ့မှောက်တွင် သဘောတူညီပြီး ဖြစ်ပါသည်။ TP Myanmar ဘက်မှလည်း မိမိတို့တောင်းဆိုချက်များရရှိသည်နှင့် တပြိုင်နက် လိုအပ်သောတောင်းပန်မှုများအား ချက်ချင်းပြုလုပ်သွားရန် ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ယခု Club NYPian Admin ၏ဆက်လက်တင်းမာမှုများကြောင့် NYP Myanmar Organizer အားကျနော်တို့ဘက်မှ ယုံကြည်စွာ ထားခဲ့သော သဘောတူညီမှု ပျက်ပြား လုနီးနီး ဖြစ်နေရပြန်ပါသည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ဤကိစ္စတွင် NYP Myanmar ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှ ယုံကြည်စွာ ခံ့အပ်ထားသော Myanmar Organizer ထက် Club NYPian Admin ၏အခန်းကဏ္ဌမှာ များစွာ သာလွန်အရေးပါကြောင်း ခံစားမိပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ နောက်နောင် ယခုကိစ္စဖြင့် ပက်သက်၍သော်လည်းကောင်း အခြားသောအကြောင်းအရာများအတွက်သော်လည်းကောင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်သည့်အခါ Admin ကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ မိမိ၏သဘောထားကို ပြောဆိုတင်ပြဆွေးနွေးရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ Forum Post များတွင်သာ စာလုံးများဖြင့် တဦးထဲ ရေးသားဆွေးနွေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ အားလုံးသော ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ၏ ရှေ့မှောက်တွင် ဆွေးနွေးခြင်းကပို၍ နည်းလမ်းကျမည်ဟု နားလည်မိပါသည်။ ထို့အပြင် Admin ပြောသည့်အတိုင်း ကျနော်တို့ TP Myanmar ပါဝင်သည့် မည်သည့်ကိစ္စမဆို ကန့်ကွက်မှု နှင့် နှုတ်ထွက်မှုသာ ပြုလုပ်မည်ဆိုခြင်းမှာလည်း မဖြစ်နိုင်သည့် အရာပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်ကျောင်းစွဲဖြင့် ပြသနာ တက်ခဲ့သော်လည်း TP Myanmar နှင့် NYP Myanmar တို့ကြားတွင် နောက်ဆုံးစာလုံး “Myanmar” မှာ အစဉ်အမြဲ တူညီနေပါအုံးမည်။ NYP Myanmar မှ Club NYPian ဟူ၍ အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သော်လည်း အားလုံးမှာ မြန်မာပဲဖြစ်ပါသည်။ သာဓကပြရလျှင် ယခုနှစ်ကျင်းပခဲ့သော TP Myanmar Thingyan 2008 နှင့် NYP Myanmar Thingyan 2008 တို့မှာ ကျင်းပရာနေရာ တူညီမှုကြောင့် NYP Myanmar မှ ကျင်းပရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်အချို့ ကျနော်တို့ TP Myanmar organizer များထံမှ အချို့သောအကြံဥာဏ် များ ရယူ၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော သာဓကလည်း ရှိခဲ့ဘူး ပါသည်။ ယခု ဘောလုံးပွဲ အရေးကိစ္စ ကြောင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကိုယ့်ကျောင်းစွဲဖြင့် တင်းမာခဲ့သော်လည်း တကယ်တမ်းတွင်မူ မြန်မာဟူသော နာမည်မှာ ခွဲခြားမရအောင် တူညီနေပါအုံးမည်။ ထို့ကြောင့် admin အနေဖြင့် မိမိ ရေးသားခဲ့သော အကြောင်းအရာများအပေါ် နောက်တကြိမ် ထပ်မံစဉ်းစား၍ အားလုံး၏ရှေ့မှောက်တွင် ကိုယ်ထင်ပြလျက်သာ ဆွေးနွေးပြောဆိုတင်ပြအပ်ကြောင်း လေးစားစွာ အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဇေယျတု သဗမဂ်လံ။ မဂ်လာအပေါင်းနဲ့ အစဉ်အလာကောင်းကြပါစေ။
Byasymbol of unity.
Last edited by moe on Tue Nov 25, 2008 9:20 pm; edited2times in total
Subject: Re: From Junemoe (moe) Tue Nov 25, 2008 1:21 pm
ဘယ်လိုရှင်းပြ ရှင်းပြ အကြောင်းရှာတဲ့သူကတော့ အမြဲတွေ.မှာပဲ။
လက်ပါတဲ့သူတောင် မတောင်းပန်ပဲ ခံငြင်းသေးရင်၊ဘာလို.ပါးစပ်နဲ.ပဲပြောတဲ့သူကတောင်းပန်ရမှာလဲ။
TP ကတချို.သူတွေက စရိုင်းတာလား။
ပြောတော့ဖြင့် မိန်းကလေးများနှင့်အပြိုင် ရေးသားပေးပို့ခြင်း ပြုလုပ်မည် မဟုတ်တော့ကြောင်း ဆို။
Subject: Re: From Junemoe (moe) Tue Nov 25, 2008 9:12 pm
Title အသစ်တစ်ခုအောက်တွင် ကျနော့ nick ကိုခေါင်းစဉ်တပ်၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆွေးနွေးမှု အသွင်ဖြင့် ရေးသားပေ:ပို့ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းအရာများမှာလည်း ရင့်ထန်၍ပုတ်ခတ် ပြောဆိုရေးသားဟန် လုံးဝမပါဝင်ပဲ တိုက်ရိုက် ဆိုလိုရင်းများကိုသာ ယဉ်ကျေးစွာ တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခင် NYP ကျောင်းသူများသာရေးသားသော Let’s talk about Dogs, RE: Daywalker F Post စသော ခေါင်းစဉ်များအောက်တွင် ယှဉ်ပြိုင်ငြင်းခုံ ရေးသားခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဖြစ်ခဲ့ပြီးသော အဖြစ်အပျက်ကို မည်သူမှန်သည် မည်သူမှားသည်ဟူ၍လည်း ရှင်းပြပြောဆိုနေခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ Club NYPian မှလိုချင်သော လူကြီးလူကောင်းပီသစွာ တောင်းပန်ခြင်းဖြင့် ဝင်ရောက်ရေးသားဆွေးနွေး ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Club NYPian Admin ကိုယ်တိုင် ဤရေးသားပေးပို့ချက်များ ကိုနားလည်မှုရှိစွာ လက်ခံဆွေးနွေးမည်ဟုလည်း ယုံကြည်ပါသည်။ ယခုရေးသားပြောဆိုသော NYPian ကျောင်းသူ ကိုလည်း လူကြီးလူကောင်းပီသစွာ ဝင်ရောက်ပြောဆိုဆွေးနွေးရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ အမိတို့ မိန်းကလေးအချင်းချင်း သတင်းဖလှယ် တုန့်ပြန်ကျီစယ်သော ရေးသားဟန်များဖြင့် ဆွေးနွေးမှုအား မပြုလုပ်ရန် မေတ္တာ ရပ်ခံပန်ကြားအပ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Subject: Re: From Junemoe (moe) Tue Nov 25, 2008 11:54 pm
Subject: Re: From Junemoe (moe) Wed Nov 26, 2008 12:02 am
Subject: Re: From Junemoe (moe) Wed Nov 26, 2008 1:28 am
Subject: Re: From Junemoe (moe) Wed Nov 26, 2008 1:55 am
Subject: Re: From Junemoe (moe) Wed Nov 26, 2008 1:58 am
Subject: Re: From Junemoe (moe) Wed Nov 26, 2008 2:00 am
witchdoll>>>>> why ?????
Subject: Re: From Junemoe (moe) Wed Nov 26, 2008 2:03 am
>>one>>cuz u luk confused. =)
Subject: Re: From Junemoe (moe) Wed Nov 26, 2008 2:35 am
oh ya... confusing...
bcoz witchdoll and moe are all posting smiley pic althernatively.....
Subject: Re: From Junemoe (moe) Wed Nov 26, 2008 12:23 pm
Subject: Re: From Junemoe (moe) Wed Nov 26, 2008 11:52 pm
Subject: Re: From Junemoe (moe) Thu Nov 27, 2008 2:51 am
ငြိမ်လှချည်လား Admin? တစ်ခုခုတော့ ပြောအုံးမှပေါ့။ ကျနော့အရေးအသားတွေ ရုတ်တရက်ကြီး ပျော့ကျသွားလို့ ပြန်ရန်တွေ့မရ ဖြစ်နေတာလား။ ငြိမ်းချမ်းစွာဆွေးနွေးမှုပါ Admin ။ TP ကျောင်းသားတွေ ထင်သလောက်လည်း မရိုင်းကြပါဘူး။ စိတ်ဆတ်တယ် လက်ပါတာမြန်တယ် ထစ်ဆို နှုတ်သီးကြမ်း လက်သီးကြမ်းပေမဲ့ စိတ်တော့မကောက်တတ်ပါဘူး။ဘယ်နေရာမဆို NYP ပါရင် TP လဲမပါဘူးလို့ ကျနော်တို့ စိတ်ထဲမှာမရှိပါဘူး။ ကျနော်ပြောတာတွေကို နားလည်တယ်ဆိုရင် ယခုကိစ္စမှာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဘာတွေလိုအပ်လည်းဆိုတာ Admin လည်းသိလောက်ရောပေါ့။ Admin ကိုယ်တိုင်လည်း နောက်နောင်ဆွေးနွေးတင်ပြစရာရှိ ခဲ့ရင် Forum မှာသာမက အားလုံးရဲ့ရှေ့မှာ NYP Myanmar ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့အနေနဲ့ မားမားကြီး ရပ်ပြီးပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။ သို့မှသာ Club Nypian ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် အားကိုးလောက်စရာ ဖြစ်မှာပါ။ Forum ထဲမှာ အားလုံးက တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း အားကိုးရသလို အခြားကျောင်းမှ ကျောင်းသားများရှေ့မှောက်မှာလည်း NYP ကွဆိုပြီး NYP ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် မားမားကြီးရပ်တည် ပြလိုက်ပါ။ Admin ကိုယ်တိုင် ဒီလိုစွမ်းဆောင် နိုင်မယ်လို့ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ Admin ကိုပြောပြစရာရှိသေးတယ်။ ကျနော့ Post အောက်မှာ NYPian မိန်းကလေးတစ်ယောက် အပြုံးတွေ လာပြီးဝေဆာ နေတယ်။ ကျနော်ဘာလုပ်သင့်လည်းဗျာ? Admin ကိုရော ဘယ်သူမှန်းမသိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ပြုံးပြနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုခံစားရမလဲ? Just kidding ပါ…
Subject: Re: From Junemoe (moe) Thu Nov 27, 2008 2:03 pm
Subject: Re: From Junemoe (moe) Thu Nov 27, 2008 4:33 pm
ပြုံ့းပြတော့လည်း အပြောအဆို မလွတ်သေးပါလား။
ဒါပေမယ့် အားရင်ချက်ချင်းလာပါလိမ့်မယ် မပူပါနဲ့။
Forum ပေါ်မှာ ၀င်ပြောတယ်ဆိုတာ မားမားကြီး ရပ်ပြီးနေတာလဲမဟုတ်ပါဘူး၊ လူအထင်ကြီးအောင် ၊လူကြိုက်အောင် ပြောနေတာ လဲမဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒါဆို moe ကNYP်form မှာလာပြောနေတာ မားမားကြီး ရပ်ပြီးနေတာလား၊လူအထင်ကြီးအောင် ၊လူကြိုက်အောင် ပြောနေတာလား။
အခုမပြောတော့တာလဲ မပြောတတ်လို.၊မှန်နေလို. ၀င်မပြောတော့တာမဟုတ်ဘူး။
Subject: Re: From Junemoe (moe) Thu Nov 27, 2008 11:13 pm
ဟားဟား။ ကောင်းပါပြီဗျား။ ဒီလိုဘာမှမပြောပဲ အစောကြီးထဲကနေခဲ့မယ်ဆိုရင် အရမ်းကောင်းမှာပဲ။ ဒီလိုပဲ အေးအေးဆေးဆေး တိတ်တိတ်လေး နေနိုင်ကြပါစေ။ Posts ဖျက်ခိုင်းတာကလည်း တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကိုထိခိုက်တာအပြင် NYP ကကျောင်းသူတွေ အဲဒီလို မျိုးတွေရေးကြပါလားဆိုပြီး လူတွေသိကုန်မှာစိုးလို့ပါ။ ရေးတဲ့သူကရေးပေမဲ့ အားလုံးကို သိမ်းကျုံးပြီး ထင်မှာစိုးလို့ပါ။ အမိတို့ပြောသလိုပဲ ကျနော်တို့လဲ မဆိုင်တဲ့ NYP ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုတော့ မထိခိုက်စေချင်ပါဘူး။ မောင်းသံကြီးတိတ်သွားတာလဲ ကောင်းပါတယ်။ လမ်းကြုံလို့ အမိကို စနောက်မိတာ လဲစိတ်မဆိုးပါနဲ့။ ရွံစရာကြီးလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုပဲကျနော်တို့က ပျော်တတ်လို့ပါ။ တခြားဘာ အဓိပ္ပါယ်မှလည်း မရှိပါဘူး။ Admin ကိုလည်းပြောလိုက်ပါ ကျနော်တို့ နားလည်မှုရှိပါတယ်လို့။ အပ္ပမာဒေနသမ္ပာဒေထ။
Subject: Re: From Junemoe (moe) Thu Nov 27, 2008 11:47 pm
orrr lu twae ka lae ma lwal par lar.....
pyaw tot so lae pyaw tal....
ma pyaw bu so tot lae ma pyaw bu tat...
bar kyi lae ha....
lar pee ma ywet nat
Subject: Re: From Junemoe (moe) Fri Nov 28, 2008 1:08 am
ုဟုတ်ပ။ စိတ်ပျက်စရာပဲ။ စိတ်ပျက်စရာကြီး။
လူ.အလို နတ်မလိုက်နိုင်ဆိုတာ ဒါပဲဖြစ်မယ်။
နတ်တောင်မလိုက်နိုင်တာ၊ လူကမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိပ်မဆန်းပါဘူး။
post အတွက်ကတော့ nyp ကမိန်းခလေးတွေက သူတို့ကို ထိခိုက်ပါတယ် ဆိုရင် အဲ့လို ကိုယ်တိုင် ပြောလို.ရပါတယ်။
admin ကိုပြောပြီး ဖျက်ခိုင်းပေးပါ့မယ်။
တခြားသူရေးတဲ့ Post တွေကိုတော့ မသိဘူး။ရမယ်ထင်ပါတယ်။
nyp ကမိန်းခလေးတွေ ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။
မဟုတ်ရင်ကတော့ အရင်ကပြောပြီးတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ကနေ ကျွန်တော်တို.ဖြစ်သွားပြီလား။
Subject: Re: From Junemoe (moe)